Ogaden News Agency (ONA) – Habeenkii Fanka iyo Shirkii OYSU ee faracyada Sanca iyo Dhadhaab
Habeenkii Fanka iyo Shirkii OYSU ee faracyada Sanca iyo Dhadhaab
Posted by ONA Admin	/ January 11, 2014
Xaflad habeenka Hidaha iyo Dhaqanka ayuu ururka OYSU faraca Yemen uu ku qabtay maaalada Sance taasoo ay qabtaan ururka dhalinyarada ee dalka yemen iyo kooxda Horseed ee S.Ogadeniya. Xafladaa oo ay kasoo qayb galeen dhamaan bulshada reer Ogadeeniya qaybehiida kala duwan sida jaaliyada S.Ogadeeyi ee dalka Yemen, ururka hooyooyinka iyo gudiga qoxootiga Somalida Ogadeeniya ee dalka Yemen iyo dhamaanba umada Soomaali waynta kunool dalka Yemen.
Waxaa xafladan lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka S.Ogadeniya, arimaha lasoo bandhigay waxaa kamid ahaa sida dhaantooyinka, buraanburka, gabayada, heesaha, iyo majaajulooyinka iwm.
Waxaa kaloo maalinnimadii Jamcaha oo xerada Xagardheere ee deegaanka Dhadhaab lagu qabtay kulan balaadhan oo ay kasoo qaybgaleen inta badan laamaha OYSU ee gobolka Woqooyi Bari ee Kenya, shirkaa oo ahaa shir wada tashi ah ayaa waxaa kasoo qayb galay ergooyin kakala yimid faracyada OYSU ee Dhagaxlay, Ifo iyo Xagardheere sidoo kale waxaa kasoo qaybgalay kulanka Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Ururka oo uu matalayay halgame Bashiir Maxamad. Waxaa isna khadka telephonka kaga soo qayb galay xidhiidhiyaha OYSU ee Bariga Africa halgame C/rashiid sh Maxamad.
Kulankan oo furmay abaare 10:00 barqinimo xiliga Bariga Africa ayaa warbixino dhinacyo badan taabanaysay laga soo jeediyay iyo wax qabadkii OYSU mudadii ay Bariga Africa ka jirtay.
Sidoo kale waxaa lasoo bandhigay qorshayaasha ay OYSU ugu tala gashay in sanadkan cusub lafuliyo. Waxaa kulanka xooga lagu saaray arimaha abaabulka iyo amaanka waxaana la’isla qiray in uu wacyiga bulshadu yahay mid aad u sareeya lana doonayo in halkaas laga sii dhaqaajiyo. Wuxuuna shirku soo gabagaboobay abaare 3:00 galabnimo xiliga Xagardheere.
ONA/Sanca iyo Dhadhaab.